အေ မရိ ကန် ရဲ့ နောက် ဆုံး ထွက် ဂျရတ် အာဖို့ဒ် အ တန်းစားဖြ စ်သော USS ဂျ ရတ်အာ ဖို့ဒ် (CVN-78) လေယာဉ် တင်သေ င်္ဘာကြီး – Shwe Ba
ဒီ နောက်ဆုံး ထွက် Super carrier ကြီးကို နာမ ည်ကြီး သင်္ဘောတည် ဆောက်ရေး company ဖြစ် သည့် Newport News Shipbuilding မှတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး 13.9.2009 မှာရေချပြီး 22.7.2020 မှာအမေရိကန် 🇺🇸 ရေတပ်သို့တပ်တော်ဝင် ခဲ့ ပါ တယ် ။အမေရိကန် ၏ 38 ဆက်မြောက် သမ္မတ ဖြစ်သည့်ဂျရတ်ဖို့ဒ် ကို ဂုဏ်ပြုသ ည့် အနေဖြင့် ထိုသင်္ဘောကြီး ကို ဂျရတ်အာဖို့ဒ် ဟုနာမည်တပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထို USS ဂျရတ် အာဖို့ဒ် ကြီး ဟာ အမေရိကန်ရေတပ် မှ အနာဂတ် တွင် ဆက်လက် တည်ဆောက်သွားမည့် ဂျရတ်အာဖို့ဒ် အတန်းစားလေယာဉ်တင် သင်္ဘောအုပ်စု၏ ပထမဆုံးသင်္ဘောကြီးဖြစ် ပါတယ် ။ ကဲဒါဆိုရင် ထိုသင်္ဘောကြီး ၏ အရွယ်အစား ကို အရင်ြေ ပာပါရစေ ။
ထို USS ဂျရတ်အာဖို့လ် ကြီးဟာ တန်ချိန် 100000 ခန့်ရှိပါတယ်။ အနုမြူစွမ်းအင်သုံးေ လယာဉ်တင်သင်္ဘောဖြစ်သည့်အတွက် A1B Nuclear Reactor (2) လုံးကို တပ်ဆင်အသုံးပြုထားတာဖြစ် ပါ တယ် ။ ထို Nuclear Reactor တွေဟာ နှစ်ပေါင်း 22 နှစ်ကြာမှ လောင်စာ တစ်ခါဖြည့်ရတာဖြစ် ပါတယ် ။ထိုလေယာဉ် တင်သင်္ဘောကြီး ဟာ တစ်နာရီ ကို အမြန်ဆုံး 56 kilometers နှုန်းဖြင့် စစ် ဆင်နိုင်ပါတယ် ။ သက်တမ်းအနေဖြင့် 20 မှ 25 နှစ်အထိအသုံးပြုမည်ဟု ဆိုပါတယ်။
ထိုလေယာဉ် တင်သင်္ဘောကြီး တွင် ပြေးလမ်း2ခုပါရှိပြီးLift (3) ခုပါပါတယ်။ ကုန်းပတ်ပေါ်လေယာဉ်များကို လျှပ်စစ်တွန်းကန်အားကိုအသုံးပြု၍ လွတ်တင်မှာဖြစ်ပြီး ထိုလေယာဉ်များပြန်ဆင်းလျှင် ဘရိတ်ကြိုးစနစ်ကိုအသုံးပြုထတယကြောင့် ပြေးလမ်းပ်ါတွင် အရှိန်လွန်မှုများကိုမဖြစ်စေဘဲ အန္တရ်ာယကင်းကင်းဆင်းသက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး၏ ကိုယ်ထည်ကို 15 တန်အလေးချိန်ရှိသည့် ပုံစံတကျဖြစ်သော သံမဏိအမာစားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ 🇺🇸
ထို USS ဂျရတ်အာဖို့လ် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီးတွင် 320 kilometers အထိထောက်လှမ်းနိုင်သောAN/SPY-3 Multi-function Radar ၊ AN/SPY-4အသံလှိုင်းခြေရာခံ radar တို့ကိုတပ်ဆင်ထားသည့်အပြင် အခြားသော ဝေဟင်၊ရေပြင် နှင့် မြေပြင် ထောက်လှ မ်းရေးစနစ်တွေတပ်ဆင်ထားပါတယ်။
3. တစ်မိန စ်တွင် 20mm ကျည်အတောင့်ရေ 7500 နှုန်းဖြင့် မီတာ 5500 အ ထိပစ်ခတ်နိုင် သည့် Phalanx အနီးကပ်လေကြောင်း ရန် ကာကွယ်ရေး စက်သေနတ်ကြီး (3) လက် နှင့်
တို့ကိုသင်္ဘောကြီး ၏ ပတ်ပတ်လည်တွင် တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်များ ကို ကုန်းပတ်ပေါ်တွင် သာမက လေယာဉ် တင်သင်္ဘော အတွင်းပိုင်းရှိ လေယာဉ်သိုလှောင်ရုံများတွင် ပါတင်ဆောင်ပါက စုစုပေါင်း အစီး (100) ကျော်တင်ဆောင်နိုင် ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။🇺🇸ထိုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး တွင် အမှုထမ်း (4539) ယောက် လိုက် ပါ ရပါတယ် ။ ထို USS ဂျရတ်အာဖို့ဒ် တစ်စီးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ 12.8 billion တန်ကြေးရှိတယ်လို့သိရပါ တယ်။ ( သင်္ဘောကြီး ၏Research and Development ကုန်ကျစရိ တ်ပါ ထည့်တွက်ပါက 17.5 Billion ကုန်ကျပါတယ်။)
ထို ( CVN-78 ) ကြီး သည် သက်တမ်း( 51 )နှစ် ရှိပြီဖြစ် သည့် USS Enterprise ( CVN-65 ) နေရာ တွင် အစား ထိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ထို ဂျရတ်အာဖို့လ် အတန်းစား လေယာဉ် တင်သင်္ဘော နောက်တစ်စီးဖြစ် သည့် USS ဂျွန် အက်ဖ်ကနေဒီ ( CVN-79 ) ကြီး မှာ တည်ဆောက်မှုပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီး မကြာခင် အမေရိကန်ရေတပ်သို့တပ်တော်ဝင်လာတော့မှာဖြစ် ပါတယ်။ဒါကတော့ အမေရိကန် 🇺🇸ရေတပ် ၏ နောက်ဆုံးထွက် လေယာဉ် တင် သင်္ဘောဖြစ် သည့် USS ဂျရတ်အာဖို့ဒ် ကြီးအကြောင်းကို ကျွန်တော် လက်လှမ်းမှီသရွှေ့တင်ပြလိုက် တာဖြစ် ပါတယ် ။
ဒီ နောကျဆုံး ထှကျ Super carrier ကွီးကို နာမ ညျကွီး သင်ျဘောတညျ ဆောကျရေး company ဖွဈ သညျ့ Newport News Shipbuilding မှတညျဆောကျထားတာဖွဈပွီး 13.9.2009 မှာရခေပြွီး 22.7.2020 မှာအမရေိကနျ ရတေပျသို့တပျတျောဝငျ ခဲ့ ပါ တယျ ။အမရေိကနျ ၏ 38 ဆကျမွောကျ သမ်မတ ဖွဈသညျ့ဂရြတျဖို့ဒျ ကို ဂုဏျပွုသ ညျ့ အနဖွေငျ့ ထိုသင်ျဘောကွီး ကို ဂရြတျအာဖို့ဒျ ဟုနာမညျတပျပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ထို USS ဂရြတျ အာဖို့ဒျ ကွီး ဟာ အမရေိကနျရတေပျ မှ အနာဂတျ တှငျ ဆကျလကျ တညျဆောကျသှားမညျ့ ဂရြတျအာဖို့ဒျ အတနျးစားလယောဉျတငျ သင်ျဘောအုပျစု၏ ပထမဆုံးသင်ျဘောကွီးဖွဈ ပါတယျ ။ ကဲဒါဆိုရငျ ထိုသင်ျဘောကွီး ၏ အရှယျအစား ကို အရငျွေ ပာပါရစေ ။
ထို USS ဂရြတျအာဖို့လျ ကွီးဟာ တနျခြိနျ 100000 ခနျ့ရှိပါတယျ။ အနုမွူစှမျးအငျသုံးေ လယာဉျတငျသင်ျဘောဖွဈသညျ့အတှကျ A1B Nuclear Reactor (2) လုံးကို တပျဆငျအသုံးပွုထားတာဖွဈ ပါ တယျ ။ ထို Nuclear Reactor တှဟော နှဈပေါငျး 22 နှဈကွာမှ လောငျစာ တဈခါဖွညျ့ရတာဖွဈ ပါတယျ ။ထိုလယောဉျ တငျသင်ျဘောကွီး ဟာ တဈနာရီ ကို အမွနျဆုံး 56 kilometers နှုနျးဖွငျ့ စဈ ဆငျနိုငျပါတယျ ။ သကျတမျးအနဖွေငျ့ 20 မှ 25 နှဈအထိအသုံးပွုမညျဟု ဆိုပါတယျ။
ထိုလယောဉျ တငျသင်ျဘောကွီး တှငျ ပွေးလမျး2ခုပါရှိပွီးLift (3) ခုပါပါတယျ။ ကုနျးပတျပျေါလယောဉျမြားကို လြှပျစဈတှနျးကနျအားကိုအသုံးပွု၍ လှတျတငျမှာဖွဈပွီး ထိုလယောဉျမြားပွနျဆငျးလြှငျ ဘရိတျကွိုးစနဈကိုအသုံးပွုထတယကွောငျ့ ပွေးလမျးပျါတှငျ အရှိနျလှနျမှုမြားကိုမဖွဈစဘေဲ အန်တရျာယကငျးကငျးဆငျးသကျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ထိုလယောဉျတငျသင်ျဘောကွီး၏ ကိုယျထညျကို 15 တနျအလေးခြိနျရှိသညျ့ ပုံစံတကဖြွဈသော သံမဏိအမာစားဖွငျ့ပွုလုပျထားပါတယျ။
ထို USS ဂရြတျအာဖို့လျ လယောဉျတငျသင်ျဘောကွီးတှငျ 320 kilometers အထိထောကျလှမျးနိုငျသောAN/SPY-3 Multi-function Radar ၊ AN/SPY-4အသံလှိုငျးခွရောခံ radar တို့ကိုတပျဆငျထားသညျ့အပွငျ အခွားသော ဝဟေငျ၊ရပွေငျ နှငျ့ မွပွေငျ ထောကျလှ မျးရေးစနဈတှတေပျဆငျထားပါတယျ။
ထို USS ဂရြတျအာဖို့ဒျ လယောဉျတငျ သင်ျဘောကွီး တှငျ ကိုယျပိုငျ ကာကှယျရေးလကျနကျ အဖွဈ
3. တဈမိန ဈတှငျ 20mm ကညျြအတောငျ့ရေ 7500 နှုနျးဖွငျ့ မီတာ 5500 အ ထိပဈခတျနိုငျ သညျ့ Phalanx အနီးကပျလကွေောငျး ရနျ ကာကှယျရေး စကျသနေတျကွီး (3) လကျ နှငျ့
တို့ကိုသင်ျဘောကွီး ၏ ပတျပတျလညျတှငျ တပျဆငျထားပါတယျ။
5. SH-60 ရငေုပျသင်ျဘောတိုကျခိုကျရေးရဟတျယာဉျမြား နှငျ့
လယောဉျ၊ ရဟတျယာဉျမြား ကို ကုနျးပတျပျေါတှငျ သာမက လယောဉျ တငျသင်ျဘော အတှငျးပိုငျးရှိ လယောဉျသိုလှောငျရုံမြားတှငျ ပါတငျဆောငျပါက စုစုပေါငျး အစီး (100) ကြျောတငျဆောငျနိုငျ ပါတယျလို့ဆိုပါတယျ။ထိုလယောဉျတငျသင်ျဘောကွီး တှငျ အမှုထမျး (4539) ယောကျ လိုကျ ပါ ရပါတယျ ။ ထို USS ဂရြတျအာဖို့ဒျ တဈစီးကို အမရေိကနျဒျေါလာ 12.8 billion တနျကွေးရှိတယျလို့သိရပါ တယျ။ ( သင်ျဘောကွီး ၏Research and Development ကုနျကစြရိ တျပါ ထညျ့တှကျပါက 17.5 Billion ကုနျကပြါတယျ။)
ထို ( CVN-78 ) ကွီး သညျ သကျတမျး( 51 )နှဈ ရှိပွီဖွဈ သညျ့ USS Enterprise ( CVN-65 ) နရော တှငျ အစား ထိုးတာဝနျထမျးဆောငျနိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ထို ဂရြတျအာဖို့လျ အတနျးစား လယောဉျ တငျသင်ျဘော နောကျတဈစီးဖွဈ သညျ့ USS ဂြှနျ အကျဖျကနဒေီ ( CVN-79 ) ကွီး မှာ တညျဆောကျမှုပွီးစီးနပွေီဖွဈပွီး မကွာခငျ အမရေိကနျရတေပျသို့တပျတျောဝငျလာတော့မှာဖွဈ ပါတယျ။ဒါကတော့ အမရေိကနျ ရတေပျ ၏ နောကျဆုံးထှကျ လယောဉျ တငျ သင်ျဘောဖွဈ သညျ့ USS ဂရြတျအာဖို့ဒျ ကွီးအကွောငျးကို ကြှနျတျော လကျလှမျးမှီသရှတေ့ငျပွလိုကျ တာဖွဈ ပါတယျ ။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဆိုက်ကပ်ထားသည့် အီတလီ အပျော်စီးသင်္ဘော(The Costa Atlantica) တွင် COVID 19 ကူးစက်ခံရသူ (၅၀)ဦး ခန့်ရှိ